काठमाडौंमा ठुलो दुर्घटना : काठमाण्डौ मलको को अगाडी कारले ठक्कर दिदा ५ जनाको मृत्यु ,१० घाईते - Online Palanchok
काठमाडौंमा ठुलो दुर्घटना : काठमाण्डौ मलको को अगाडी कारले ठक्कर दिदा ५ जनाको मृत्यु ,१० घाईते
काठमाण्डौ मलको अगाडी रहेका मान्छेलाई कारले ठक्कर दिएको छ । मलको अगाडी उभिएका मान्छेलाई कारले ठक्कर दिदा ५ जनाको घटना स्थलमा मृत्यु भएको छ । भने , करीब १० जना घाईते भएका छन् ।
घाईते मध्ये केहिको अवस्था गम्भिर गरेको छ । केहि सामान्य घाईते भएका छन् । मलको अगाडी बस कुरेर बसेका , समान खरिद बिक्री गर्न लागेका मानिसलाई तिब्र गतीमा आएको बा १८ च ४८७३ नम्बरको कारले ठक्कर दिएको हो । तिब्र गतिका कारण कार अनियन्त्रीत भएर सडक भन्दा पर गएर ठक्कर दिएको हो ।
दुर्घटना लगत्तै सर्वसाधारणले चालकलाई नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीको जिम्मा लगाएका छन् । घाइतेहरुलाई बिभिन्न अस्पताल लगिएको छ । मृत्यु हुनेहरुको पहिचान हुन नसकेको घटना स्थलमा रहेका पब्लिक आवाज संवाददाताले जानकारी दिए । घटनाको थप बिवरण आउन बाकी रहेको छ । पब्लिक आवाजले खिचेका घटना स्थलका फोटो हरु
यी ५ सपनाहरु झुक्किएर पनि कसैलाई नसुनाऊनुस्, जो तपाईका लागि हुनेछ शुभ संकेत !
हरेक व्यक्तिले सुतेको समयमा सपना देख्नु एक सामान्य कुरा हो। हरेक दिन हामीले देखेको सपनाले हाम्रो जीवनमा ठूलो प्रभाव पार्ने गर्छ। प्राय मान्छेहरुले निन्द्राबाट बिउझिंदा आफूले देखेका सपनाहरु बिर्सिने गर्छन। त्यसैले उनीहरुलाई सपनामा देखेका कुराहरुले जीवनमा पारेको असरबारे थाहा हुँदैन।
ज्योतिष शास्त्रका अनुसार हरेक सपनको केही अर्थ रहने गर्छ र यसले कुनैपनि व्यक्तिको भविष्यको संकेत गर्ने गर्छ। प्राय मान्छेहरु रातको समय मा देखेको सपना विहान उठ्नासाथ आफ्ना परिवारका अन्य सदस्यलाई सुनाउने गर्छन। यसरी आफूले देखेका सपना सुनाउने गर्दा क हुन्छ ? यदि आफूले देखेका केही अचम्मलाग्दा सपनाहरु निन्द्राबाट बिउँझिने बितिकै अरुलाई सुनाउने गर्दा तपाईलाई त्यस सपनाको फल प्राप्त नहुने साथै यसले तपाईको जीवनमा पर्ने प्रभाव घट्दै जान्छ। आज हामी तपाईहरुलाई यस्ता केही पाँच वटा सपनाको बारेमा बताउन जाँदै छौँ जुन तपाईले अन्य व्यक्तिहरुलाई सुनाऊनु भएमा तपाईको जीवनमा यसबाट हुने प्रभाव कम हुँदै जाने गर्छ।
१.आफूलाई मृत अवस्थामा देख्नु भएमा :
Prevनेपालकी शान श्रृंखला खतिवडाको अग्रता कायमै , यो देशसंग छ कडा प्रतिष्पर्धा (भिडियो सहित)
Nextकरिब ३ घण्टा यौन आनन्द दिन्छ प्याजले, कसरी प्रयोग गर्ने ? जानी राखौ